समाचार - कसरी उत्खनन ईन्धन बचत गर्न
कसरी उत्खनन ईन्धन बचत गर्न?
धेरै मालिकहरू चिन्ता लिनु पर्दछ "ईन्धन बचाउन सहयोग पुर्‍याउन खोदाउने सञ्चालनको लागि के सुझावहरू छन्?" अधिक ईन्धन खपत किनभने, लागत तदनुसार वृद्धि हुनेछ, र लाभ स्वाभाविक रूपले कम हुनेछ। हामी कसरी कार्य ईन्धन र उत्खननको सुरक्षा बिना कुनै ईन्धन बचाउन सक्दछौं?
उत्खनन कार्यको बखत अवैध अपरेशनहरू कम गर्नुहोस्
यो अवैध कार्य हो, यसमा प्रयोग गरिएको तेल पूर्ण रूपमा खेर फालियो। जहाँसम्म सम्भव भएसम्म, साइट वातावरण अनुसार उत्खनन चाल र निर्माण विधिहरू बनाउनुहोस्, जस्तै अनावश्यक घुमाव कम गर्ने।
उत्खननकर्ताको ईन्जिन सुस्तता कम गर्नुहोस्
इडलिंगले इन्धन पनि खपत गर्दछ, किनकि तेल अझै हाइड्रोलिक पम्पमा प्रवेश गर्दछ। यी सुस्त समयहरूमा गुमाएको तेलको जम्मा मात्रा थप गर्दछ।
भोल्टेज ड्रपको घटना घटाउनुहोस्
उत्खननकर्तासँग निश्चित लोड हुने क्षमता छ, तर जब यो बोक्ने बोझले यसको भार बढी गर्दछ, उत्खननकर्ताले दबाब झर्नेछ, र ईन्धन खपत अधिक दबाव झर्ने स्थितिमा हुनेछ।
ईन्जिनको गति घटाउनुहोस् जब खुदाई हिंड्दै छ
ईन्जिनको वेग छिटो छ, उत्खनन गर्न बढी ईन्धनको लागि यात्रा गर्नु आवश्यक छ। जब इञ्जिनको गति कम हुन्छ, तेलको मात्रा उपभोग हुन्छ।
खुदाई गर्ने कार्य उचाई
जब खुदाई ट्रकको उही उचाइमा चल्दछ वा ट्रक भन्दा थोरै माथि, काम गर्ने दक्षता सुधार हुन्छ र ईन्धनको खपत कम हुन्छ।
छडी %०% सम्म पुग्छ
जब बाल्टिन सिलिन्डर र खुदाउने र आर्म सिलिन्डर र पाखुराको कनेक्टिंग रॉड दायाँ कोणहरूमा हुन्छन्, प्रत्येक सिलिन्डरको ड्राइभि force्ग फोर्स सबैभन्दा ठूलो हुन्छ र ईन्धन खपत पनि सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। त्यसकारण, जब उत्खननकर्ता खन्न थाल्छ, स्टिकलाई अधिकतम दायरामा विस्तार नगर्नुहोस्, करीव %०% बाट सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ।
छडी को कार्य सीमा
उत्खनन बूम र बाल्टिनको प्रभावकारी कार्य दायरा टाँकाको भित्री भागमा degrees० डिग्रीसम्म टाढा छेउमा degrees 45 डिग्रीसम्म छ। अधिकतम दायरामा अपरेट नगर्नुहोस्।
खाँदो दुबै पक्षबाट सुरू हुन्छ
जब एक खुदाईले ट्रिन्च गर्दछ, यो खाईको दुबै तिर सुरू हुन्छ। यस तरिकाले, खाडलको बीचको भाग खन्न सजिलो छ, जसले प्रयास र ईन्धन बचत गर्दछ।
सानो खुदाई गहिराइ, राम्रो अर्थव्यवस्था
उत्खननकर्ताको उत्खननको गहिराई सकेसम्म विभाजित गरिनु पर्छ। यदि तपाइँ एक पटक यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, दायरा धेरै ठूलो छ। यसबाहेक, उत्खनन गर्ने कार्य क्षमता कम हुनेछ, र एकै समयमा, यसले अधिक तेल खपत गर्दछ।
मलाई आशा छ कि माथि उल्लिखित सुझावहरूले प्रत्येक होस्ट मेशिन अपरेटर ईन्धन बचतमा व्यावहारिक मद्दत पुर्‍याउन सक्छ! ईन्धन बचत पैसा कमाउने अर्को तरिका हो। उही समयमा, यसले उत्खननको काम गर्ने जीवनलाई राम्रोसँग रक्षा गर्न सक्छ, किन छैन?